musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Yambiro yeGomarara: Chirungurira Chinogona Kuva Nengozi
Svondo rino, America yakaona kuti GERD kana Gastroesophageal Reflux Chirwere ndicho chikonzero cheMutungamiri Biden pahuro. Kazhinji, zviratidzo zveGERD hazvionekwe zvakanyanya. Uye izvozvo zvinogona kuva nengozi.
Reflux chirwere chinogona kukonzera Esophageal Cancer. Kuchenesa huro, kurwadziwa kwehuro, inzwi rakashoshoma, chikosoro chinoramba chichienderera, kudzipwa paunorara, kunyange kukukurwa kwemazino ndezvimwe zvezviratidzo zvisinganyanyi kuzivikanwa zveGERD. Chirungurira ndicho chiratidzo icho munhu wese anoziva.
Kune vazhinji vekuAmerica, zviratidzo izvi ndiyo yambiro yavo chete yekuti vari panjodzi yegomarara.
Iri iVhiki reKuzivisa kweGERD - rakarongedzerwa kuti rienderane nekukara kweKutenda. Asi iwe haufanirwe kudya zvakanyanya kuti uwane GERD uye njodzi inogona kuunza kune hutano hwako.
Mapiritsi Anogona Kusava Mhinduro
Vazhinji kwazvo vanoona chirungurira sechinhu chaicho chehupenyu uye vanoshandisa mishonga yekutenga-the-counter kurerutsa zviratidzo zvavo. Nehurombo, kudzoreredzwa kwechiratidzo hakubvisi kukanganisa kuyerera kwemudumbu acid uye bile kunogona kukonzera.
Mushonga haumise kupfapfaidzwa kwemukati memudumbu izvo zvinogona kukonzera pre-gomarara mamiriro anozivikanwa seBarrett's Esophagus. Izvozvo zvinoitika kana mutsara wesophagus wako uchichinja kuti ufanane nedumbu rako. Kune vamwe, zvinoguma nekufambira mberi kunouraya kuEsophageal Cancer.
Barrett's Esophagus haikonzeri zviratidzo. Izvi zvinoreva kuti zviratidzo zveGERD zvinogona kunge zviri yako yambiro - uye inogona kuve kiyi yekuponesa hupenyu hwako!
Kana ikabatwa pachine nguva, Gomarara reEsophageal rinogona kudzivirirwa. Kurapwa kunze kunogona kubvisa matishu eBarrett uye kumisa gomarara risati ratanga.
Uri Panjodzi Here?
Mamirioni evaAmerica vane Barrett's Esophagus izvozvi - uye havazvizive.
Nguva zhinji, sezvakanga zvakaita murume wangu, varwere vane Gomarara reEsophageal havaone kuti vane dambudziko kusvikira vatadza kumedza kamwe kamwe. Kana vangosvika panzvimbo iyoyo, kupona kunova kushaikwa. Munhu mumwe chete pavashanu akabatwa neEsophageal Cancer ndiye achararama makore mashanu.
Imhaka yekuti chirwere ichi chinowanzobatwa kunonoka zvekuti kurapwa hakuwanzo kushanda.
Asi inogona kubatwa nekukurumidza - uye kudzivirirwa.
Zviri Nyore Kutariswa
Kekutanga, varwere vekuAmerica vanogona ikozvino kuwana njodzi yavo zviri nyore. Kukurumidza kumedza kwepiritsi-saizi EsoCheck mudziyo inopa iri nyore uye inokwanisika cheki yesophagus yavo. Iyo EsoGuard bvunzo inoshandisa DNA kuongorora kuvepo kweBarrett's Esophagus.
Bvunzo idzi dzinowanikwa mumahofisi evanachiremba uye munzvimbo dzekuongorora muPhoenix, Las Vegas, Denver, neSalt Lake City - nenzvimbo dzakawanda dzakarongwa mumwedzi iri kuuya. Dzidza zvakawanda paEsoGuard.com.
Ndinofara, vanhu vazhinji vane GERD havazoiti kenza.
Asi ichi hachisi chirwere chaunoshuvira kusiira mukana.
Kuongororwa ndicho chipo chikuru chaunogona kupa avo vaunoda.
Ingobvunza zviuru zvemhuri seyangu kuti Esophageal Cancer yasiya nechigaro chisina chinhu panguva yezororo.
Mindy Mintz Mordekai ndiye muvambi weEsophageal Cancer Action Network, Inc. (ECAN). Akafirwa nemurume wake neEsophageal Cancer apo vana vavo vaingove nemakore mapfumbamwe negumi nevaviri.